बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पुस १ गतेदेखि बाघ गणना फेरि थालिएको छ । वर्षैपिच्छ बाघ गणना गर्ने कि संरक्षण, यो प्रश्नमा सरकारको ध्यान गएन किन ?
विदेशीले डलर दियो भन्दैमा प्रत्येक वर्ष बाघ गणना गर्ने, गैंडालगायतका वन्यजन्तुलाई यताबाट उता सार्ने काम हुनेगरेको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न गणनाभन्दा पनि वन्यजन्तुलाई माफिया, तस्कर सिकारीबाट कसरी जोगाउने भन्ने छ ।
वन्यजन्तु सिकारी सिकार गरिरहेका छन् र तिनलाई राजनीतिक र प्रभावशालीको संरक्षण छ भन्ने खुलस्त भइसकेको छ । भरिया अथवा खेताला पक्राउ पर्ने र असल सिकारी, तस्कर पक्राउ गर्न सुरक्षा निकाय किन सकिरहेको छैन । गणना गर्न र ठाउँसारी गर्न विदेशीले सहयोग दियो भन्दैमा वर्षैपिच्छ वन्यजन्तुलाई यताउता लैजानुभन्दा १० वर्षमा एकपल्ट गणना गर्ने र प्रत्येक दिन वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै वन्यजन्तु सिकारी र सिकारीका संरक्षकलाई कडा कारवाही गर्ने समुचित व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । चितवन र पर्साबाट मंसिर १४ बाट र पुस १ बाट बर्दियाबाट बाघ गणना गर्ने र यो गणना सकिएपछि शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा पनि गणना गर्नै भनिएको छ । यसरी बाघ गणना गर्दा खर्च त हुन्छ हुन्छ, यसबाट लाभ के हुन्छ ? संख्या थाहा होला, ती संख्याका बाघको संरक्षण कसरी हुनसक्छ ? केही तैयारी छैन । बाघ तर्सिने र भारततिर जाने खतरा पनि रहन्छ । साथै बाघ बारे गोप्य सुचनाहरु तस्करले पाउन सक्ने र बाघ अरु जोखिममा पनि पर्नसक्छन् ।
वन्यजन्तु विभागका अनुसार क्यामेरा ट्यापिङ प्रविधिबाट बाघको गणना गरिनेछ । निकुञ्जभित्रको दुई किलोमिटर लम्बाई र चौडाइको क्षेत्रलाई एउटा ग्रिड मानिनेछ । र, हरेक ग्रिडमा दुई वटा क्यामेरा राखिनेछ । बाघ त्यो क्षेत्रमा आवतजात गर्दा क्यामेराले तस्वीर लिन्छ । एक ठाउँमा १५ दिनसम्म क्यामेरा राखेर तस्वीर खिचिन्छ । र, १५ दिनमा उठाएर अर्को ग्रिडमा ती क्यामेराहरुलाई राखिन्छ । यो १५ दिनमा केमरामा कैद हुन नसकेका बाघबारे कसले गणना गर्ने ?
४ सय ८० क्यामेरा र त्यत्तिकै संख्यामा तालिमप्राप्त व्यक्तिहरु पनि परिचालन गरिनेछ । तर यसबारेमा लगानीकर्ता विदेशी व्यक्ति र संस्थाहरु पनि बाघ गणनामा सामेल हुनेछन् । यसको अर्थबाघ मात्र होइन, केमराले अन्य वन्यजन्तुको पनि फोटो खिच्ने छ र तिनको बारेमा पनि जानकारी लिन सकिनेछ । निश्चय नै बाघ गणना हुनुपर्छ, गैंडा लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षण हुनुपर्छ । यसो भन्दैमा वन्यजन्तुलाई खतरा हुने र खर्च बढ्ने गरी किन गणनामा बढी ध्यान दिने गरिएको छ ?